Misy karazany telo ireo fiangonana nivondrona ho FJKM na Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara.
- LMS na London Missionary Society
- FFMA na Friend's Foreign Mission Association
- MPF na Mission Protestante Française
Tamin'ny andron'ny Mpanjaka Ranavalona I (1828-1861) dia noenjehina tokoa ny mpino kristianina rehetra. Ary tsaroana tamin'izany fa ireo kristianina izay tratra dia nolefonina avy hatrany, notoraham-bato, navarina teny Ampamarinana ary tao ihany koa no nodorana. Nisy kosa anefa ireo izay afa-nitsoaka sy nihery ka tany anaty zohy na lava-bato tany no niaraka nanao rojom-bavaka ary nitondram-bavaka ireo maty maritiora nandritra ny fanenjehana. Anisan'ny maty novonoina tamin'izany i Rasalama Maritiora.
Tamin'ny andron'ny Menalamba koa ny taona 1895 dia nisy ireo Misionera vahiny izay maty novonoina tao Arivonimamo toa an-dry William, Lucy, Bloson Johnson, Paul Minault, Benjamin Escande...
Ireo daty tsara tadidiana:
- 11 martsa 1950: nanambaran'ny FFMA fa ny firaisan'ny Fiangonana entin'ny LMS, FFMA, MPF no hampiraisana sy hitondrana ny Fiangonana Malagasy ho azo antoka.
- 8 novambra 1950: fananganana ireo komity ny firaisan'ny Fiangonana izay niarahan'ny Malagasy sy Misiona. Ny malagasy koa dia nanana ilay firaisana sy naniraka ny evanjelista tany anindran-tany izay atao hoe Isan'Enimbolana.
- 13 - 17 aogositra 1968: synoda lehibe voalohany tany Toamasina niarahan'ireo Misiona telo niaraka tamin'ny Malagasy. Tao no teraka ny firaisan'ny Fiangonana ka nomena ny anarana hoe Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM.
Aoka anefa ho tsaroana fa ny LMS niova ho FKM na Fiangonan'i Kristy eto Madagasikara ny taona 1962, ny FFMA niova ho FFM na Fiangonana Frenjy Malagasy ny taona 1958 ary ny MPF niova ho FPM na Fiangonana ara-Pilazantsara eto Madagasikara ny taona 1960.
Crée le lundi 16 avril 2018 à 04:46:42